Ny olana lehibe amin'ny mimari-droa azo ampiharina hatrany ny fikarohana etika dia fa polarizes fifanakalozan-kevitra. Miantso pihetseham-po areti-mifindra na Andramo, karavato ary Time unethical vongana fianarana ireo miaraka amin'ny tena zava-doza amin'ny fomba izay tsy mahasoa. Mifindra hiala mimari-droa fisainana sy fiteny tsy polarizing antso ho antsika mba hampiasa mifangaroharo unethical fiteny hanafina fitondran-tena. Kosa, dia mitohy dia midika ny etika, araka ny eritreritro, mitarika ho amin'ny tsy tsara sy marina fiteny. Ankoatra izany, dia mitohy ny fikarohana hevitra etika manazava ny olona rehetra-na dia mpikaroka izay manao asa izay efa heverina "etika" -should miezaka hamorona ny tsaratsara kokoa etika mandanjalanja eo amin'ny asany.
Ny soa farany ny hetsika amin'ny fomba fisainany dia mitohy fa mampirisika-tsaina fanetren-tena, izay mety eo anatrehan'ny olana sarotra etika. Ny fanontaniana ny fikarohana fitsipika ao amin'ny taona nomerika no sarotra, ary tsy misy olona iray tokony ho toy izany ao an-matoky ny fahaizany mamantatra ny marina Mazava ho azy fa ny zavatra.